Iswiidhan oo dadkeeda uga digtey u safarka goobihii dhulgariirka - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Iswiidhan oo dadkeeda uga digtey u safarka goobihii dhulgariirka
Uppdaterat måndag 14 mars 2011 kl 12.27
Publicerat måndag 14 mars 2011 kl 10.09
Musiibada Japan iyo Iswiidhan
Dhulgariirkii iyo duufaanihii ka dhacey dalka Japan.
Wasaaradda arrimaha dibadda dalkaan Iswiidhan ayaa muwaadiniinteeda uga digtey in safarkii laga maarmi waayo maahee aysan u safrin meelaha uu dhulgariirku ka dhacey dalka Japan sida Aomori, Iwate, Miyagi, Fukushima iyo Ibaraki.
Safaaradda dalkaani ku leeyahay Tokyo iyo xarunta wasaaradda arrimaha dibadda ee Stockholm ayaa warar kooban ka haya dadka Íswiidhishkaa ee goobahaas ku dhaawacmey ama ku dhintey.
Si loo soo daadgureeyo dadka Iswiidhishka ah ee raba in ay goobahaas ka soo baxaan ,ayey wasaaradda arrimaha dibaddu maanta oo isniin ah dadkaas u diyaarisey bas goobahaas ka soo qaada, keenana caasumadda dalka Japan ee Tokyo.
Hay'adda dalkaan Iswiidhan u qaabilsan ilaalinta sharqanta ee marka magaceeda la soo gaabiyo loo yaqaano SSM ayaa si joogta ah ula socota waxyaalaha ka dhacaya dalka Japan khaasatan warshadaha korontada dhaliya ee ku shaqeeya quwadda nukliyarka.
Hay'adda ayaa xaqiijineeysa in qiicii ka baxay warshadihii nukliyarka ee ku yiil goobahaas dhulgariirku ka dhacey , uu yahay mid khatar ku ah deegaanka u dhow iyo in kale .
Dawladda Japan ayaa ka daadgureeysey goobahaas dadkii ku noolaa.
Hay'adda SSM ayaa dhanka kale ku qiimeeysey in dhacdadaasi aysan dalalka kalee Aasiya wax khatar ah oo weeyn u laheeyn.
Dhinaca kalana mucaawinada rasmigaa ee Iswiidhan siineeyso dalka Japan ayaa la marsiinayaa hey'adda difaaca bulshada ee marka magaceeda la soo gaabiyo loo yaqaano MSB.
MSB ayuu hadda hal qof oo shaqaale ahi goobtaas ka joogaa, wuxuuna ka mid yahay koox khubaraa oo lix qof ka kooban, kana kala yimid dalal kala duwan, ayna isku dubaridey hay'adda qaramada midoobey ee loo yaqaano UNDAC.
Sida la ogsoon yahay dalka Japan ayaa waxaa dhawaantaan ka dhacey mid ka mid ah dhulgariirkii ugu xoogga badnaa ee dalkaas abid ka dhaca kaas oo sababey duufaan aad u xoog badan oo xataa qarxisey qaar ka mid ah warshadaha quwadda nukliyarka korontada ka dhaliya kuwaas oo laga cabsi qabo khatarta ah in shucaaca warshadahaas nukliyarka ka baxay uu goobahaas ku faafo.